Inkonzo ye-imeyile elula yeAmazon (iAmazon SES) - SMTP kwilifu
Njengomsebenzisi we IiNkonzo ze-Amazon Web, Ngamanye amaxesha ndifumana ii-imeyile kubo zibhengeza iinkonzo ezintsha okanye zindimema ukuba ndithathe inxaxheba kwi-beta okanye kwenye. Kwiveki ephelileyo ndifumene i-imeyile eyazisa Inkonzo ye-imeyile elula yeAmazon.
IAmazon SES ikakhulu sisixhobo sabaphuhlisi. Ngokukodwa kwabo banqwenela ukwenza ezabo iinkqubo zokuhanjiswa kwe-imeyile / iinkqubo zokuthengisa ngokuchasene nokusebenzisa iqonga le-Email Service Provider's (ESP). Ngokusisiseko yi-SMTP efini. IAmazon ivumela abaphuhlisi ukuba bahambise imiyalezo yokuthengiselana kunye neninzi (aka yokuthengisa) nge-imeyile ngeeseva zabo ze-imeyile, ngexabiso elincinci kakhulu. Le nkonzo ithembisa ukususa umthwalo wokungabinakho ukusebenza, ukumiselwa kweseva ye-imeyile, ulawulo lweedilesi ze-IP, ubhaliso lwengxelo ye-ISP kunye neminye imiba yeziseko zophuhliso enxulumene nokuhanjiswa kunye nokuthumela isixa esikhulu se-imeyile. Bonke abaphuhlisi kufuneka bakhathazeke ngokwenza i-imeyile (html okanye isicatshulwa esicacileyo) kwaye siyigqithisele kwiAmazon ukuze ihanjiswe.
Abanikezeli beenkonzo ze-imeyile (i-ESPs) banikezela ngeeNkqubo zokuSebenzisa iiNkqubo zokuSebenza (ii-APIs) ezinokusetyenziswa ngendlela efanayo kodwa ngokungabinamda kweenkonzo zeWebhu zeAmazon kunye nemodeli yamaxabiso, kwiimeko ezininzi, ebiza iindleko kakhulu iyenza uzibuze ukuba le nkonzo iya kuba naliphi igalelo kwimarike yoMboneleli weNkonzo ye-imeyile. Ndikhathazekile ukubona inani lee-ESP ezongezelelweyo eziza kuqala ngeAmazon SES njengesiseko sazo- ezinokuthi zichaze ingxaki ethile kumzi mveliso we-imeyile onenzuzo kakhulu.
Ngaba ucinga ukuba i-Amazon SES iya kuba nefuthe kwi-ESP? Kuthekani ngabo basebenza ngamashishini amakhulu kwaye bahlawulisa imali enkulu ukufikelela kwi-API yabo?
tags: Ukuphicothwa kweBrand
Izibonelelo zokwenza umsebenzi wesisa
Feb 1, 2011 ngo-3: 48 PM
Ndithetha nabanye abantu abakwishishini abakholelwa ngokwenene ukuba oku kunokuba yinto enkulu kubanikezeli beenkonzo ezinkulu ze-imeyile abenza itoni yomsebenzi we-OEM. Awunakufumana ndleko zisebenza ngakumbi kunale nkonzo- nokuba kuya kufuneka uqeshe abacebisi malunga nokuhanjiswa ngaphezulu kwayo!
Feb 1, 2011 ngo-6: 57 PM
Owona mqobo ekuqaliseni i-ESP yakho ngawo ngumthamo kunye nenqanaba le-Amazon ebekiweyo. Zombini ireyithi ngomzuzwana kunye nokuthumela ngokupheleleyo ngosuku kunqunyelwe de ubonise imbali yeso sidingo. Ungafikelela kwinqanaba apho ungathumela khona ii-imeyile ezizigidi ngosuku kodwa kuya kuthatha ixesha. I-ESP entsha iya kuba ngcono ngenkqubo ye-hybrid ye-SMTP yangaphakathi kunye neenkonzo zeAmazon de zibe nomthamo ofanayo wokuhamba kwe-imeyile. Ngaphandle koko banokugqabhuka ngaphezulu kwesabelo esivunyelweyo.
Feb 21, 2011 ngo-10: 12 PM
Abafuni ii-ESP, cinga okwangoku iyakuba yingcali eyazakhela ngokwakho umakishi we-imeyile abalandelayo